Daniel Craig dia mbola manaiky ny hilalao an'i James Bond?
Ilay britanika malaza 48 taona Britanika Daniel Craig, izay fantatry ny maro ho mpilalao lehibe ao amin'ny sarimihetsika James Bond, dia tena nanitikitika ny mpankafy azy. Ny ampitson'ilay mpilalao sarimihetsika dia nilaza fa tsy te hanao veloma ny anjara andraikiny manerantany izy, na dia somary misarona aza.
Tao amin'ny fetibe iray tany New York izany
Ankehitriny, ny megalopolisan'ny Amerikana dia manomana ny Fetiben'ny New Yorker. Iray tamin'ireo vahiny nasaina handray anjara tamin'io i Daniel Craig sy ny mpanatrika. Efa ela ny mpilalao dia niresaka momba ny fitifirana amin'izao fotoana izao, momba ny antony nahatonga azy ho vazivazy ary momba ny zavatra andrasany amin'ny hoavy. Ary, araka ny efa noeritreretin'ny rehetra, dia mikasika ny Bondiana. Toy izao no nanazavan'i Daniel ny asany tamin'ny sarimihetsika momba ilay mpandraharaha manokana:
"Angamba, teo amin'ny fiainako dia tena tsara vintana aho. Nanao ny iray tamin'ireo anjara asa lehibe indrindra tamin'ny taonjato aho - James Bond. Heveriko fa tsy misy asa izay mety mifanaraka amin'izany. Raha manapa-kevitra ny hampiato ny horonantsary aho dia hanao zavatra mahatsiravina fotsiny aho. Angamba, ny fanapahan-kevitra momba ny filalaovana filalaovana dia ny fotoana sarotra sy mampientanentana, farafaharatsiny ho ahy, ary tena tiako ny asako. Raha mbola afaka mahavita sarimihetsika aho, dia hanao izany amim-pifaliana aho. "
Ity fahatafintohinana ity dia somary nanohina ny mpihaino, satria vao haingana i Craig dia nilaza fa hanapaka ny lalany izy, raha toa ka tsy miseho ao amin'ny Bond. Niova tanteraka ny fihetseham-po, ilay mpilalao dia naneho hevitra toy izao:
"Aoka tsy hotsarovantsika ny lasa. Eny, nilaza izany aho, saingy tsy avy amin'ny ratsy izany. Raha tsaroanao, dia fotoana fotsiny vao vita ny nitifitra. Tsy nody aho nandritra ny herintaona ary tsy nahita ny fianakaviako. Inona koa no azoko antenaina? "
Taorian'io, nangataka ny hanome fanamarihana momba an'i Craig ny mpihaino raha mifandraika amin'ny sanda sarobidy ny fanovana toy izany amin'ny anjara asan'ny Bond. Izao no nolazain'ilay mpilalao:
"Ny zava-drehetra izay miresaka momba ny vola ankehitriny dia fitantarana an-gazety. Tsy nisy nanolotra ahy 100 tapitrisa dolara, izay lazain'ny olona rehetra. Amin'ny ankapobeny, mila miandry kely ianao. Avy amin'ny Agent 007 ny olona dia reraka be. "
Daniel Craig ary bevohoka Rachel Weiss sy New York: sary vaovao momba ny mpivady
Rachel Weiss no navoaka voalohany taorian'ny fanambarana ny fitondrana vohoka
33 sarin'ireo olo-malaza avy amin'ireo taona 90, izay tsara kokoa ny manadino
Craig dia Bond nandritra ny 9 taona
Nasaina hanao ny andraikitr'i James tany amin'ny 2006 lavitra i Daniel raha 38 taona. Avy eo dia nanao sonia fifanarahana izy mba handefa bandy efatra momba ny Agent 007. Raha mbola manaiky ny hiara-miasa sy hiditra ao amin'ny Bond i Craig, dia miandry fifanarahana hafa izy amin'ny 2016 2022 taona. Ny vola miditra an-dalambon'i Daniel ho an'ny anjara asan'i James Bond teo aloha dia $ 40,4 tapitrisa.
Officially: Ricky Martin sy Jwan Yosef nanamafy fa nanambady izy ireo
Tsy misy andro tsy misy fanatanjahantena: Goldie Hawn, 72 taona, amin'ny hazakazaka
Kim Kardashian dia nibilaogy tamin'ny sary misy ny Meksikana Vogue
Ny endriky ny sarimihetsika momba ny tantaran'i Prince Harry sy ny vadiny dia nomanina: ny fanambarana dia nambara tamin'ny volana Mey
Ny endrik'ilay andro: Rihanna, izay tsy nanana lanjany tamin'ny akanjo hoditra fohy
I Joseph Gordon-Levitt no nampiseho voalohany ny zanany
Ny fiainan'i Adriana Ugarte
Scarlett Johansson sy ny vadiny dia nanokatra ny fivarotana popcorn tao Paris
Gigi sy Bella Hadid
Nataon'i Ciara dreadlocks
Voasesika Parrot - fikarakarana sy fikojakojana
Inona no homena lehilahy iray ho amin'ny tsingerintaona?
Clostridia amin'ny feon'ny olon-dehibe
Alaska hoditra ao anaty fantsom-bozaka
Ghoul any amin'ny angano slavy - ahoana no hiatrehana ny ghouls?
Ahoana no fomba hananganana voanio mung?
Kiwi sy banana jam
Oliva - tsara sy ratsy ho an'ny vatana
Kanye West sy Baby Nord dia natory tao amin'ny fivarotana
Ragout miaraka amin'ny hena amin'ny multifariate
Fanamboaran-tsakafo feno harona
Manicure ho an'ny fampakaram-bady 2015
Skirt styles 2015